Halka laga heli karo shaqo sannadka 2015 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Byggarbete vid Nya Karolinska Solna (NKS) Foto: Fredrik Persson / TT /
Halka laga heli karo shaqo sannadka 2015
Goobaha aad shaqo ka heli kartid sannadkan
La daabacay torsdag 8 januari 2015 kl 15.06
Labada sanno ee soo socda ayaa la filayaa in ay abuurmi doonaan 100 000 oo ah shaqooyin cusub taas oo hoos u dhigi doonta shaqo la’aanta dalka, sida ay muujineyso saadaasha heyadda shaqo geynta Arbetsförmedlingen. Tord Strannefors waxaa madaxa saadaasha heyaddan waxuuna aaminsan yahay in ay shaqooyinkan abuurmaya ay ahaan doonaan kuwo dan ugu jirrto dhallinyarada:
- Markii suuqa shaqada soo wannagsanaado waxay badaanaa ay faa’ido u tahay dhallinyarada. Laakiin waaa haddii ay heystaan tacliinta dugsiga sare si ay ugu faa’ideystaan wanaaga suuqa shaqada, ayuu yeri.
Sannadkan ayaa la saadalinayaa in ay shaqooyinka kordhi doonaan, sida lagu muujiyey sadaasha Arbetsförmedlingen iyada oo la filaya in shaqooyin gaaraya 46000 in ay dalka ka bauurmaan halka sannadka ku xiga 2016 la filayo shaqooyinka abuurma in ay gaaraan 59000. Inta badan shaqooyinkan ayaa ka bauurmi doona xaruumaha guud sida xaruumaha dowliga ah iyo kuwo degmo iyo gobolba iskugu jira. Sidoo kale ayaa la filayaa in shaqooyinka qaarkood ay ka abuurmaan laamaha adeegga sida maqaaxiyada iyo hotellada.
Balse ruuxa shaqo doonka ah halka uu ugu fursad badan yahay in uu shaqo ka helo ayaa ahaan doonta xaruumaha caafimadka iyo iskuulada iyo weliba xataa laamaha dhimayaasha, sida uu yeri Tord Strannefors oo madaxa saadaasha heyadda shaqada.
- Haddii qofka doonayo in uu hubsado shaqo heladiisa, markaas waxaa haboon in uu sameysto waxbarashada daryeelka, gaar ahaan midda daryeelka waayeelka ama waa in uu sameysto waxbarasho dhanka dhismaha ah. Sidoo kale waxbarashooyinka farsamada sida sancada gaadiidka ayaa ayana leh fursad shaqo lagu heli karo ayuu yeri.
Tord Strannefors ayaa carabka ku adkeeyey in midda ugu muhimsan shaqo helida ruuxa ay tahay in uu ugu yaraan heysto shahaadada dugsiga sare. Xataa ayuu yeri shaqooyinka aan tacliinta iyo xirfadda goonida ah u baahnayn waxaa badankooda la siiya ruuxa heysta ugu yaraan shahaadada dugsiga sare.
Balse waxaa la saluug laga muujinayaa kobaca dhaqaalaha dalka halka uu ku tiirsan yahay maadaama maanta dhaqaalaha yahay mid ku tiirsan iibsiga badeecadaha halka uu waagii hore kor u kaca dhaqaalaha Sweden ahaa mid ku tiirsan badeecadaha la dhoofiyo. Laakiin dhaqaalaha caalamka oo maanta ah mid aan laysku hubin ayaa sabab u ah in badeecadaha dalka gudahiisa lagu isticmaalo ay xabaaraan kobaca dhaqaalaha, sidaas waxaa yeri Åke Gustavsson oo ah dhaqaalo yahan ka howl-gala bangiga Swedbank. Haddii dadka ay yareeyaan iibsiga badeecadaha markas waxaa qatar galeysa shaqooyinka gaar ahan laamaha la saadaalinayo in sannooyinka soo socda shaqooyin ka abuurmaan, sida uu yeri dhaqaalo yahan Åke Gustavsson:
- Xaqiiqda waxay tahay iibsiga badeecadaha ayaa maanta lagu tiirsan yahay, gaar ahaan adeega u dhow macaamiisha, sida adeega maqaayadaha, dukaamada iwm kuwaas ah ku tiirsan aan iibsano balse sidoo kale wax ugu horeeya oo dadka ay yareeyaan iibsigoo, ayuu yeri.